UTSHINTSHELA NJANI KWI-OPENDNS OKANYE IGOOGLE DNS KWIWINDOWS - ITHAMBILE
Utshintshela njani kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiWindows
Ngaba isantya sakho se-intanethi sikunika amaphupha amabi ukusukela mva nje? Ukuba ufumana isantya esicothayo ngelixa ubrawuza ke kufuneka utshintshele kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS ukuze wenze i-intanethi yakho ikhawuleze kwakhona.
Ukuba iiwebhusayithi zokuthenga azilayishi ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuba wongeze izinto kwinqwelo yakho ngaphambi kokuba iphele isitokhwe, iividiyo zekati ezintle kunye neenja azifane zidlale ngaphandle. ukuphazamisa KuYouTube kwaye ngokubanzi, uzimasa iiseshini zokufowuna zoom kunye neqabane lakho elikude kodwa unokubeva nje bethetha ngelixa isikrini sibonisa ubuso obufanayo ababenze kwi-15-20 mins eyadlulayo ke inokuba lixesha lokuba utshintshe iSistim yegama lakho leDomain. (idla ngokufinyezwa njenge-DNS).
Yintoni iNkqubo yeGama leDomain oyibuzayo? I-Domain Name System ifana nencwadi yefowuni ye-intanethi, ihambelana neewebhusayithi ezihambelana nazo Iidilesi ze-IP kwaye uncedo ekuboniseni kwisicelo sakho, kwaye ukutshintsha ukusuka kwenye iseva ye-DNS ukuya kwenye ayinakonyusa nje isantya sokhangelo lwakho kwaye yenze ukusefa kwe-intanethi kwindlela yakho kukhuseleke ngakumbi.
Utshintshela njani kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiWindows?
Yintoni Inkqubo Yegama Lommandla?
Uyitshintsha njani iNkqubo yeGama leDomain (DNS) kwiWindows 10?
Indlela yoku-1: Ukusebenzisa iPhaneli yoLawulo
Indlela yesi-2: Ukusebenzisa i-Command Prompt
Indlela yesi-3: Ukusebenzisa iisetingi zeWindows 10
Tshintshela kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiMac
Kweli nqaku, siza kuxoxa ngokufanayo, sidlulele kwiinketho ezimbalwa ezikhoyo zeseva ye-DNS kwaye ufunde indlela yokutshintshela kwiNkqubo yeGama leDomain ekhawulezayo, ebhetele nekhuselekileyo kwiWindows nakwiMac.
Njengesiqhelo, siqala ngokufunda ngakumbi ngombandela esiwufundayo.
I-intanethi isebenza kwiidilesi ze-IP kunye nokwenza naluphi na uhlobo lokukhangela kwi-intanethi umntu kufuneka afake ezi zintsonkothileyo kwaye kunzima ukukhumbula uthotho lwamanani. I-Domain Name Systems okanye i-DNS, njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, iguqulela iidilesi ze-IP zibe lula ukuzikhumbula kunye namagama anentsingiselo e-domain esihlala singena kuyo kwibar yokukhangela. Indlela iseva ye-DNS isebenza ngayo rhoqo xa sichwetheza kwigama lesizinda, inkqubo ikhangela / imephu yegama lesizinda kwidilesi ye-IP ehambelana nayo kwaye iyibuyisele kwisiphequluli sethu sewebhu.
Iisistim zamagama esizinda ziqhele ukwenziwa ngababoneleli benkonzo ye-intanethi (ISPs). Iiseva abazibekayo zihlala zizinzile kwaye zithembekile. Kodwa ngaba oko kuthetha ukuba zikwazezona zikhawulezayo kwaye zingcono iiseva ze-DNS phaya? Akunjalo.
Iseva ye-DNS engagqibekanga oyabelweyo inokuthi ivalwe yitrafikhi evela kubasebenzisi abaninzi, isebenzisa isoftware engasebenziyo kwaye kwinqaku elibalulekileyo, inokuba ilandelela umsebenzi wakho we-intanethi.
Ngethamsanqa, ungatshintshela kwenye, esidlangalaleni ngakumbi, ngokukhawuleza kwaye ikhuselekile iseva ye-DNS ngokulula kumaqonga ahlukeneyo. Ezinye zeeseva ze-DNS ezidumileyo nezisetyenziswayo phaya zibandakanya i-OpenDNS, iGoogleDNS kunye ne-Cloudflare. Ngamnye kubo uneengenelo kunye nokungalunganga.
Iiseva ze-Cloudflare DNS (1.1.1.1 kunye ne-1.0.0.1) zinconywa njengezona zincedisi ezikhawulezayo ngabavavanyi abaninzi kwaye zineempawu zokhuseleko ezakhelwe ngaphakathi. Ngamaseva e-GoogleDNS (8.8.8.8 kunye ne-8.8.4.4), ufumana isiqinisekiso esifanayo sokukhangela amava okukhangela iwebhu ngokukhawuleza kunye neempawu zokhuseleko ezongezelelweyo (Zonke iilogi ze-IP ziyacinywa kwiiyure ze-48). Ekugqibeleni, sinayo i-OpenDNS (208.67.222.222 kunye ne-208.67.220.220), enye yezona seva ezindala kunye nezona zide ze-DNS ezisebenzayo. Nangona kunjalo, i-OpenDNS ifuna ukuba umsebenzisi enze i-akhawunti ukuze afikelele kwiseva kunye neempawu zayo; ezigxile kuhluzo lwewebhusayithi kunye nokhuseleko lwabantwana. Bakwanikezela ngeepakethi ezimbalwa ezihlawulweyo ezineempawu ezongezelelweyo.
Enye ipere yeeseva ze-DNS onokufuna ukuzama iiseva ze-Quad9 (9.9.9.9 kunye ne-149.112.112.112). Ezi kwakhona zinika ukhetho kuqhagamshelwano olukhawulezayo olukhawulezayo kunye nokhuseleko. Inkqubo yokhuseleko / ubukrelekrele boloyiko kuthiwa kubolekwe kwiinkampani ezingaphezu kweshumi elinesibini eziphambili zokhuseleko lwe-cybersecurity kwihlabathi liphela.
Kwakhona Funda: I-10 yeeSeva zeDNS ezigqwesileyo zoLuntu ngo-2020
Kukho iindlela ezimbalwa (ezintathu ezichanekileyo) zokutshintshela kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiWindows PC esiza kuyigubungela kweli nqaku. Eyokuqala ibandakanya ukutshintsha izicwangciso zeadaptha ngephaneli yolawulo, eyesibini isebenzisa umyalelo okhawulezileyo kunye nendlela yokugqibela (kwaye mhlawumbi eyona ilula kuzo zonke) inathi sisiya kwizicwangciso ze windows. Kulungile ngaphandle kwe-ado enye, masingene kuyo ngoku.
1. Njengoko kucacile, siqala ngokuvula iphaneli yokulawula kwiinkqubo zethu. Ukwenza njalo, cofa iqhosha leWindows kwikhibhodi yakho (okanye ucofe i icon yemenyu yokuqalisa kwibar yomsebenzi) kwaye uchwetheze iphaneli yokulawula. Nje ukuba ufunyenwe, cinezela u-enter okanye ucofe ku Vula kwindawo yolawulo ekunene.
2. Ngaphantsi kwePhaneli yoLawulo, khangela Uthungelwano kunye neZiko loKwabelana kwaye ucofe okufanayo ukuvula.
Phawula: Kolunye uhlobo oludala lweWindows, iNethiwekhi kunye neZiko lokwabelana libandakanyiwe phantsi kweNethiwekhi kunye ne-Intanethi ukhetho. Ke qalisa ngokuvula iNethiwekhi kunye nefestile ye-Intanethi emva koko ufumane kwaye ucofe kwiNethiwekhi kunye neZiko lokwabelana.
3. Ukusuka kwiphaneli yesandla sasekhohlo, cofa ku Guqula imimiselo ye-Adapter iboniswe phezulu kuluhlu.
4. Kwesi sikrini silandelayo, uya kubona uluhlu lwezinto isistim yakho eqhagamshelwe kuzo ngaphambili okanye eqhagamshelwe kuzo ngoku. Oku kubandakanya uqhagamshelo lweBluetooth, uqhagamshelo lwe-ethernet kunye ne-wifi, njl. Cofa ekunene kwigama loqhagamshelo lwenethiwekhi yakho ye-intanethi kwaye ukhethe Iipropati .
5. Kuluhlu lweempawu ezibonisiweyo, khangela kwaye ukhethe I-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ngokunqakraza kwileyibhile. Nje ukuba ukhethiwe, cofa kwi Iipropati iqhosha kwiqela elinye.
6. Yilapho sifaka khona idilesi ye-DNS yethu ekhethiweyo. Okokuqala, yenza ukhetho lokusebenzisa iseva ye-DNS yesiko ngokucofa Sebenzisa ezi dilesi zilandelayo zeseva ye-DNS .
7. Ngoku ngenisa iseva yakho yeDNS Ekhethwayo kunye nenye iseva yeDNS.
Ukusebenzisa iGoogle Public DNS, faka ixabiso 8.8.8.8 kunye 8.8.4.4 phantsi komncedisi weDNS oKhethekileyo kunye necandelo leseva yeDNS ngokulandelelana.
Ukusebenzisa i-OpenDNS, ngenisa amaxabiso 208.67.222.222 kunye 208.67.220.220 .
Unokucinga kwakhona ngokuzama i-Cloudflare DNS ngokungenisa le dilesi ilandelayo 1.1.1.1 kunye 1.0.0.1
Inyathelo lokuzikhethela: Unokuba needilesi ezingaphezu kwesibini zeDNS ngaxeshanye.
a) Ukwenza njalo, cofa kuqala kwi NONE iqhosha.
b) Okulandelayo, tshintshela kwi-DNS tab kwaye ucofe ku Yongeza...
c) Kwibhokisi ezivelelayo elandelayo, chwetheza idilesi yeseva yeDNS ongathanda ukuyisebenzisa kwaye ucinezele u-enter (okanye ucofe ku Faka).
8. Ekugqibeleni, nqakraza kwi Kulungile iqhosha ukugcina lonke utshintsho esisanda kulwenza kwaye emva koko ucofe ku Vala .
Le yeyona ndlela ilungileyo tshintshela kwi-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiWindows 10, kodwa ukuba le ndlela ayisebenzi kuwe ungazama indlela elandelayo.
1. Siqala ngokuqhuba i-Command Prompt njengoMlawuli. Yenza njalo ngokukhangela i-Command Prompt kwimenyu yokuqalisa, cofa ekunene kwigama kwaye ukhethe Baleka njengoMlawuli. Kungenjalo, cinezela i Isitshixo seWindows + X kwikhibhodi yakho ngaxeshanye kwaye ucofe ku I-Command Prompt (Admin) .
2. Chwetheza umyalelo netsh kwaye ucinezele u-enter ukutshintsha Iisetingi zeNethiwekhi. Okulandelayo, chwetheza ujongano bonisa ujongano ukufumana amagama eadaptha zenethiwekhi yakho.
3. Ngoku, ukutshintsha iseva yakho yeDNS, chwetheza lo myalelo ulandelayo uze ucinezele u-enter:
Kulo myalelo ungasentla, kuqala, buyisela Ujongano-Igama ngegama lakho lojongano olufanelekileyo esilifumene kwigama elidlulileyo nelilandelayo, buyisela X.X.X.X ngedilesi yomncedisi we DNS ongathanda ukuyisebenzisa. Iidilesi ze-IP zeeseva ezahlukeneyo ze-DNS zinokufumaneka kwinyathelo lesi-6 lendlela yoku-1.
4. Ukongeza enye idilesi yeseva ye-DNS, chwetheza lo myalelo ulandelayo uze ucofe u-enter.
ujongano ip yongeza dns name=Interface-Name addr=X.X.X.X index=2
Kwakhona, buyisela Ujongano-Igama kunye negama elifanelekileyo kunye X.X.X.X ngenye idilesi yeseva ye-DNS.
5. Ukongeza iiseva ze-DNS ezongezelelweyo, phinda umyalelo wokugqibela kwaye ubeke indawo yexabiso lesalathisi nge-3 kwaye unyuse ixabiso lesalathisi nge-1 kwingeniso entsha nganye. Umzekelo ujongano ip yongeza dns name=Interface-Name addr=X.X.X.X index=3)
Kwakhona Funda: Uyiseta njani iVPN Windows 10
1. Vula iisetingi ngokuyikhangela kwibar yokukhangela okanye ukuyicofa Isitshixo seWindows + X kwibhodi yezitshixo kwaye ucofa Useto. (Kungenjalo, Isitshixo seWindows + I iya kuvula iisetingi ngqo.)
2. Kwiisetingi iifestile, khangela Inethiwekhi kunye ne-Intanethi kwaye ucofe ukuze uvule.
3. Kuluhlu lwezinto eziboniswe kwiqela lenjongo lasekhohlo, cofa ku WiFi okanye I-Ethernet kuxhomekeke kwindlela olufumana ngayo uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi.
4. Ngoku kwiphaneli yecala lasekunene, cofa kabini kweyakho uqhagamshelo lwenethiwekhi igama lokuvula iinketho.
5. Khangela isihloko Useto lwe-IP kwaye nqakraza kwi Hlela iqhosha phantsi kweleyibhile.
6. Kwi-drop-down evelayo, khetha Imanyuwali ukukwazi ukutshintshela ngesandla kumncedisi we DNS owahlukileyo.
7. Ngoku vula i IPv4 ukutshintsha ngokunqakraza kwi icon.
8. Ekugqibeleni, chwetheza iidilesi ze-IP zeseva yakho ye-DNS oyikhethayo kunye nenye iseva yeDNS kwiibhokisi zokubhaliweyo ezinombhalo ofanayo.
(Iidilesi ze-IP zeeseva ezahlukeneyo ze-DNS zinokufumaneka kwinyathelo lesi-6 lendlela yoku-1)
9. Cofa apha Gcina , vala iisetingi kwaye wenze ukuqalisa kwakhona kwekhompyuter ukonwabela amava okhangelo lwewebhu olukhawulezayo xa ubuya.
Ngelixa eyona ilula kwezi zintathu, le ndlela ineentsilelo ezimbalwa. Uluhlu lubandakanya inani elilinganiselweyo (ezimbini kuphela) zeedilesi ze-DNS umntu angangena (iindlela ezixoxwe ngaphambili vumela umsebenzisi ukuba afake iidilesi ezininzi ze-DNS) kunye nenyaniso yokuba ulungelelwaniso olutsha lusebenza kuphela xa inkqubo yokuqaliswa kwakhona yenziwe.
Ngelixa sikuyo, siza kukubonisa indlela yokutshintsha iseva yakho ye-DNS kwi-mac kwaye ungakhathazeki, inkqubo ilula kakhulu xa ithelekiswa nezikwiWindows.
1. Cofa kwi logo ye-Apple kwikona ephezulu ngasekhohlo yesikrini sakho ukuze uvule imenyu yeApple kwaye uqhubeke ngokucofa Indlela Ekhethwayo...
2. Kwi-System Preferences menu, khangela kwaye ucofe ku Uthungelwano (Makubekho kumqolo wesithathu).
3. Apha, cofa kwi NONE iqhosha elibekwe ezantsi ekunene kwiqela lenjongo yoMnatha.
4. Tshintshela kwi-DNS thebhu kwaye ucofe ku + iqhosha elingezantsi kwebhokisi yeeseva ze-DNS ukongeza iiseva ezintsha. Chwetheza kwidilesi ye-IP yeeseva ze-DNS ongathanda ukuzisebenzisa kwaye ucinezele Kulungile ukugqiba.
eCetyisiweyo: Guqula idilesi yakho ye-MAC kwiWindows, Linux okanye iMac
Ndiyathemba ukuba esi sifundo singentla sibe luncedo kwaye usebenzisa nayiphi na kwezi ndlela zingasentla uya kukwazi ukutshintshela ngokulula kwi-OpenDNS okanye i-Google DNS kwi-Windows 10. Kwaye ukutshintshela kwiseva ye-DNS eyahlukileyo kukuncede ubuyele kwizantya ze-intanethi ezikhawulezayo kwaye unciphise amaxesha akho omthwalo. (kunye nokukhathazeka). Ukuba ujongene nayo nayiphi na imiba / ubunzima ekulandeleni isikhokelo esingentla, nceda uqhagamshelane nathi kwicandelo lamagqabaza angezantsi kwaye siya kuzama ukukulungisela yona.